उपत्यकामा आज देखि थपिएको निषेधाज्ञामा कुन समयमा, के खोल्न पाइन्छ ? के पाइँदैन ? | Naya News Nepal
Home समाचार उपत्यकामा आज देखि थपिएको निषेधाज्ञामा कुन समयमा, के खोल्न पाइन्छ ? के...
उपत्यकामा आज देखि थपिएको निषेधाज्ञामा कुन समयमा, के खोल्न पाइन्छ ? के पाइँदैन ?
१ असार २०७८, मंगलवार ०९:१५
काठमान्डौं असार १,
काठमाण्डौ उपत्यकामा आज बाट केही सहज व्यवस्थासहित निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ । काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हिजोको बैठकले एक हप्ता निषेधाज्ञा थपेर असार ७ गतेसम्म पुर्याएको हो । निषेधाज्ञा थपिय पनि केहि सहज ब्यबस्था लागु गररिएको छ ।
यसअघि निषेधाज्ञाका समयमा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसल, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान ९ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्थ्यो भने अब बिहान ११ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । यसअघि यस्ता पसल बिहान ९ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्थ्यो । यस्तै पुस्तक पसल तथा प्रिन्टिङ प्रेस बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ ।
यस्तै, अत्यावश्यक वस्तुहरुको होम डेलिभरी सेवा पनि बेलुकी सात बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । गाडी मर्मतका लागि वर्कशप बेलुका ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । विकास निर्माणजन्य सामग्रीहरु छड, सिमेन्ट, बिजुलीका सामान, स्यानिटरी, हार्डवेयर लगायतका पसल दिउँसो ४ बजेपछि सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । यस्तै राति नौ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म निर्माणजन्य सामग्री ढुवानी गर्न पाइने भएको छ । औषधि लगायतका मेडिकलजन्य अत्यावश्यक सेवाका पसलहरु यसअघि झै खोल्न पाइने छ ।
कृषिफर्म तथा कृषिजन्य वस्तुहरुको किनबेच र ढुवानीमा सहजीकरण गरिने निषेधाज्ञा आदेशमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पालना गरी बैँक तथा वित्तीय संस्थाले सीमित सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालन गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी खुकुलो बनाइएको छ । यसअघि सीमित कार्यालय मात्रै खोल्न पाइने थियो । बीमा समिति, बीमा कम्पनी र धितोपत्र बोर्डले आलोपालो गरी २० प्रतिशत जनशक्ति राखेर सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । विवाह, व्रतबन्ध लगायतका कार्यक्रम बढीमा सात जना सहभागी भएर घर वा आफू बसेकै ठाउँमा गर्न पाइने छ । जसको लागि एउटा गाडी प्रयोग गर्न पाइने छ । निजी तथा सार्वजनिक यातायात असार ७ गतेसम्मकै लागि बन्द रहनेछन् ।
भौतिक उपस्थितिमा हुने शैक्षिक कार्यक्रम बन्द रहनेछ । भौतिक उपस्थितिमा सभा–सम्मेलन गर्न पाइने छैन । होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस लगायतमा लगाइएको प्रतिबन्ध यसअघिकै निरन्तर छ ।
Previous articleतेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण ले ‘बालबालिका’ बढी प्रभावित हुने
Next articleदीपक मनाङेलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले ‘कारबाहीको माग’ गरेको छ
कोरोना अपडेट : थप ५१५३ जनामा कोरोना संक्रमण, १०८ जनाको मृत्यु
देशको अधिकांश भू-भागमा भारी वर्षासँगै बाढी र पहिरोको जोखिम, सतर्क रहन अनुरोध